ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့က ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း။ (ဓာတ်ပုံ - KACHINWAVES via AFP - မေ ၀၅၊ ၂၀၂၁)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး သုံးလကျော်ကြာတဲ့အထိ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ပြည်သူအပေါ် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေပေမဲ့ စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ ရပ်မသွားသေးပါဘူး။ ဆန္ဒပြတာတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာကြောင့် လှုပ်ရှားမှုကြီးကြီးမားမရှိတော့ပေမဲ့ လျှပ်တပြက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အခွင့်သာရင်သာသလို ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေပါသးတယ်။ လတ်တလောမှာ စစ်ကောင်စီ စာသင်ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာမို့ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ပညာရေး အလိုမရှိတဲ့ ဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုတွေက ပိုကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်။ ရန်ကုန်ကလာတဲ့ သတင်းအပြည့်အစုံကို မဆုမွန်က တင်ပြပေးပါမယ်။
ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်နဲ့ လှိုင်မြို့နယ်တွေမှာ လူငယ်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ လျှပ်တပြတ်သပိတ်တွေ လုပ်ကြပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေ ရောက်မလာခင် အမြန်ဆုံးလူစုခွဲကြတဲ့ ဆန္ဒပြသပိတ်တွေကို ဒီလအစောပိုင်းကစပြီး လမ်းမတွေပေါ်မှာ နေ့စဉ် ပြန်လုပ်လာကြတာပါ။ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ လှိုင်သာယာ၊ ဗဟန်း၊ မင်္ဂလာဒုံတို့မှာလည်း စစ်ကျွန်ပညာရေးအလိုမရှိ၊ စစ်ကောင်စီဖွင့်မယ့် ကျောင်းမတက်ဘဲ ကျောင်းထွက်ကြဖို့ စာသားတွေကို ကျောင်းနံရံတွေမှာ ရေးသားပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ လျှပ်တပြက် ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်ရှိနေသလို ဒီကနေ့မှာ NUG အစိုးရက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာတာကို ထောက်ခံကြောင်း ဆန္ဒပြ လှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် အင်ဂျင်နီယာ သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ ပါဝင်သူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာကတော့ ရန်ကုန်တင်မဟုတ်ဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံး ပြကြတာပဲ။ နယ်မှာရှိတဲ့ ကျောင်းပေါင်းစုံတိုင်းက တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ပြကြတာပဲ။ စစ်ကျွန်ပညာရေးကို လက်မခံကြဖို့ အတွက်။ ရန်ကုန်က သပိတ်က ၃ နေရာလောက်တော့ ထွက်တယ်ပေါ့နော်၊ ကြီးကြီးမားမား ကျနော်သိသလောက်ပေါ့။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရက PDF ကို ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာ လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါကို ကြိုဆိုတဲ့ အနေနဲ့ ရန်ကုန်လူထုက လှုပ်ရှားနေတာတော့ ရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ထောက်ခံကြတယ်။ ပြီးတော့ ဒါကို Action တစ်ခု အနေနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ သဘောတူကြောင်းပြဖို့ ကြိုးစားနေကြတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။”
ပြောက်ကျားနည်းနဲ့ သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေ ဆန္ဒပြနေကြတာကို စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေက လိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးတာ၊ လူနည်းနည်း စုတာတွေ့တာနဲ့ ဖမ်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် လက်ရှိ ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြ စစ်ကြောင်းတွေ နည်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်သူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ပျောက်ကြားသပိတ်လုပ်ခါစတုန်းက အကြမ်းဖက် အင်အားစုက ပျောက်ကြား သပိတ်ရဲ့ သဘောသဘာဝကို အစတုန်းက နားလည်ကြပုံမရဘူးဗျ။ လူခဏ စုတယ်၊ ပြီးရင် ပြန်ခွဲတယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ နည်းနည်း အောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာ သပိတ်အင်အားစုတွေရဲ့ လုပ်တဲ့ သဘောသဘာဝကို သူတို့ နည်းနည်း နားလည်လာပုံရတယ်။ လူနည်းနည်းစုပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့ ရောက်လာတယ်။ မနေ့ကဆို ကျနော်တို့ မြို့ထဲမှာ လူစုကြတယ်ပေါ့၊ သပိတ်မစခင်မှာပဲ သူတို့က ဒါကို ဦးတည်ပြီးတော့ ရောက်လာတယ်ပေါ့။ ဒါက ဒလန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို၊ CCTV ကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ ဒီဘက်က သပိတ်အင်အားစုတွေက ဒီဟာက ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာကို ကြိုးစားနေကြတာပါ။ မထွက်ဘဲ တော်လှန်တာ နည်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဟာကို ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ ပြရမလဲဆိုတာကို ကြိုးစားနေကြတဲ့ ပုံပါပဲဗျ။”
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမှာ ဒီကနေ့ မနက် ၈ နာရီဝန်းကျင်က ဆိုင်ကယ်သပိတ်ပြုလုပ် လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြပြီးလို့ လူစုခွဲနေတဲ့ အချိန် မနက် ၁၀ နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာ စစ်ကောင်စီရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အိမ်စီးကားတွေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ဝင်တိုက်ပြီး လူငယ် အမျိုးသမီး ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ ပါဝင်သူတစ်ဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ မြစ်ကြီးနားမြို့ ပင်မ သပိတ်စစ်ကြောင်း၊ မြစ်ကြီးနား ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေရော၊ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေရဲ့ Generation Z ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ပေါ့။ ပင်မသပိတ် အဖွဲ့နဲ့ ဒီနေ့ ၅ ရက်နေ့မှာ ဆိုင်ကယ်သပိတ်လုပ်တာ၊ မနက် ၈ နာရီလောက်ထွက်ပြီးတော့ ၁၀ နာရီခွဲလောက် လူစုခွဲတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့တွေ လူစီးကားနဲ့ အရပ်ကားပေါ့နော်။ အဲ့ဒါတွေ သုံးပြီးတော့ ရဲတွေက အနောက်ကနေမှ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုက်တိုက်တာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာ မိန်းကလေး ၄ ယောက် ဒဏ်ရာရမယ်ထင်တယ် သူတို့တွေက၊ ဆွဲပြီးတော့မှ ဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်။ ပစ်ခတ်တာတွေတော့ မရှိဘူး။ ရဲတွေက ခုတလော။ သူတို့တွေက အိမ်စီးကားတွေနဲ့ပဲ နောက်က နေပြီးတော့မှ အရှိန်ပြင်းပြင်း မောင်းပြီး တိုက်ပြီးတော့ ဖမ်းတာပေါ့နော်။ ဆိုင်ကယ်လည်း ၄ စီးလောက်ပါသွားတယ်။ ကျနော်တို့ သပိတ်ဦးဆောင်တဲ့ထဲက အမ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းပါသွားတယ်။”
ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မူဆယ်မြို့ က စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ သပိတ်စစ်ကြောင်းကို လူ ၁၀၀ ဝန်းကျင်လောက် ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူတွေ တရားမဲ့ရင် ဆန့်ကျင်ရမှာ ငါတို့ဝတ္တရားဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ချီတက်ကာ တရုတ်အလံကို မီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့ သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ Generation Z လူငယ်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“မနက် ၇ နာရီစထွက်လိုက်တယ်။ စထွက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လူအင်အား ၁၀၀ ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ ကျနော်တို့ထွက်လိုက်တယ် ခင်ဗျ။ ၁၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ထွက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ နာရီစင်သွားတယ်။ ပြီးရင် ပြည်သူ့ဆေးရုံရှေ့သွားတယ်ခင်ဗျ၊ ပြီးရင် ကျနော်တို့ တရုတ်အလံ တရုတ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အနေနဲ့ တရုတ်အလံမီးရှို့လိုက်တယ်ခင်ဗျ နာရီစင်ရှေ့မှာ။ သပိတ်စစ်ကြောင်းက အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ ပြန်ပြီးတော့ ကျနော်တို့လူစုခွဲလိုက်နိုင်တယ်ခင်ဗျ။ သူတို့ဘက်က အဲ့ဒီလိုမျိုးအရပ်ဝတ်နဲ့ နည်းနည်းလာပြီး အဲ့ဒီလိုမျိုးလေ့လာတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ အိမ်စီးကားတွေနဲ့ လာတာတော့ ရှိတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ သပိတ်စစ်ကြောင်း ဘေးနားလေးတွေပေါ့.. ဟိုလိုမျိုးကြီး သူတို့ ဝင်ပြီး ဖြိုခွဲသွားတာ ဘာညာမရှိဘူး ခင်ဗျ သပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့။ ကျနော်တို့ ကြွေးကြော်သံကတော့ အုပ်ချုပ်သူတွေ တရားမဲ့ရင် ဆန့်ကျင်ရမှာ ငါတို့ဝတ္တရားဆိုတဲ့ ဒီဆောင်ပုဒ်ပေါ့နော်။”
ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီလောက်မှာ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း ချီတက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ ရဲကားစီးလာရောက် ဖြိုခွဲလိုက်တာကြောင့် နေရာပြောင်းရွှေ့ လိုက်ရပေမဲ့ မိုးတွေ ရွာနေတဲ့ကြားကပဲ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းမှာ အမြဲဝင်တဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“လူစုနေတုန်းမှာ ထွက်ခါနီးပေါ့နော်.. ၃ နာရီထွက်မှာကို ချက်ချင်း ၃ နာရီကို ချက်ချင်းရပ်ကွက်ထဲ ဝင်လာတယ်။ ခါတိုင်းလို ကြိုစောင့်နေတာမျိုးပဲနဲ့ တောက်လျှောက်မောင်းလိုက် တောက်လျှောက် ဝင်လာတော့ လူစုခွဲပြီးမှာ အိမ်တွေမှာ ပုန်းနေလိုက်ရတာပေ့ါနော် စစ်ကြောင်းကို။ အခုချိန်တော့ ဖမ်းမိတာ မရှိပါဘူး။ စစ်သားတွေ မပါဘူး... ရဲကားပဲ သုံးစီးပေါ့နော်. ဝင်လာပြီးဆိုတာနဲ့ တစ်စီးမှာ အနည်းဆုံး ၁၅ ယောက်၊ ၂၀ တော့ ပါမှာပေါ့။ ကားသုံးစီးနဲ့ ဝင်လာတယ်။ ခွဲလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ တခြားနေရာကို ပြောင်းပြီးတော့ အမြန်ရွှေ့ပြီးတော့ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ဆန္ဒပြလိုက်ရတာပေ့ါနော်။”
အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့မှာလည်း လူထုတွေဟာ ထီးတွေ၊ မိုးကာအကျီင်္တွေနဲ့ မိုးထဲရေထဲမှာပဲ အင်အားထောင်ချီ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ နမ့်ခမ်းမြို့က ပြည်သူလူထုတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေ ပူးပေါင်းပြီး စစ်လက် အောက်ခံပညာရေး အလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့ သပိတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
နေ့စဉ်မပြတ် လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြတဲ့ မန္တလေးမြို့သပိတ်စစ်ကြောင်းတွေ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ စစ်ကျွန်ပညာရေး အလိုမရှိကြောင်း CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဦးဆောင်ပြီး စုပေါင်းသပိတ်နဲ့ ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ မိုးကုတ်၊ လားရှိုး၊ မိုးကောင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ ကျိုက်ထိုနဲ့ မော်လမြိုင်တို့မှာ စစ်ကျွန်ပညာရေး အလိုမရှိကြောင်း လူမဲ့သပိတ်၊ ဆေးနီသပိတ်တွေနဲ့ ပုံစံမျိုးစုံဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြပါတယ်။
ဖားကန့်၊ ကလေး၊ မုံရွာ၊ ထားဝယ်၊ လောင်းလုံတို့မှာ လူရာချီ ဆန္ဒပြကြသလို မကွေးမြို့အနီးကကျေးရွာတွေ စုပေါင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျိုက်ထို၊ ဟင်္သာတ၊ ပုဂံ၊ ညောင်ဦးနဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသတွေမှာလည်း ပျောက်ကြားသပိတ်၊ လူမဲ့သပိတ်၊ အရုဏ်ဦးသပိတ်တွေ ဆင်နွှဲကြပြီး စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ နေ့စဉ်မပြတ်လုပ်နေကြပါတယ်။
စဈအာဏာရှငျအောကျ ပညာရေးစနဈဆနျ့ကငျြတဲ့ လှုပျရှားမှုတှေ ကယျြပွနျ့လာ
မွနျမာနိုငျငံအတှငျးမှာ စဈတပျအာဏာသိမျးပွီး သုံးလကြျောကွာတဲ့အထိ စဈကောငျစီတပျတှကေ ပွညျသူအပျေါ ဖိနှိပျအုပျခြုပျဖို့ ကွိုးစားနပေမေဲ့ စဈအာဏာရှငျတျောလှနျရေးလှုပျရှားမှုတှကေတော့ ရပျမသှားသေးပါဘူး။ ဆန်ဒပွတာတှအေပျေါ အကွမျးဖကျနှိမျနငျးတာကွောငျ့ လှုပျရှားမှုကွီးကွီးမားမရှိတော့ပမေဲ့ လြှပျတပွကျလှုပျရှားမှုတှနေဲ့ အခှငျ့သာရငျသာသလို ဆန်ဒပွလှုပျရှားမှုတှေ ရှိနပေါသးတယျ။ လတျတလောမှာ စဈကောငျစီ စာသငျကြောငျးတှေ ပွနျဖှငျ့ဖို့ပွငျဆငျနတောမို့ စဈအာဏာရှငျလကျအောကျပညာရေး အလိုမရှိတဲ့ ဆန်ဒပွကနျ့ကှကျမှုတှကေ ပိုကယျြပွနျ့လာနပေါတယျ။ ရနျကုနျကလာတဲ့ သတငျးအပွညျ့အစုံကို မဆုမှနျက တငျပွပေးပါမယျ။
ဒီကနမေ့နကျပိုငျး ရနျကုနျမွို့၊ ကမာရှတျနဲ့ လှိုငျမွို့နယျတှမှော လူငယျတှေ ဦးဆောငျတဲ့ လြှပျတပွတျသပိတျတှေ လုပျကွပါတယျ။ စဈကောငျစီတပျတှေ ရောကျမလာခငျ အမွနျဆုံးလူစုခှဲကွတဲ့ ဆန်ဒပွသပိတျတှကေို ဒီလအစောပိုငျးကစပွီး လမျးမတှပေျေါမှာ နစေ့ဉျ ပွနျလုပျလာကွတာပါ။ သင်ျဃနျးကြှနျး၊ လှိုငျသာယာ၊ ဗဟနျး၊ မင်ျဂလာဒုံတို့မှာလညျး စဈကြှနျပညာရေးအလိုမရှိ၊ စဈကောငျစီဖှငျ့မယျ့ ကြောငျးမတကျဘဲ ကြောငျးထှကျကွဖို့ စာသားတှကေို ကြောငျးနံရံတှမှော ရေးသားပွီး ဆန်ဒထုတျဖျောကွပါတယျ။
ရနျကုနျမှာ လြှပျတပွကျ ဆန်ဒပွမှုတှေ ဆကျရှိနသေလို ဒီကနမှေ့ာ NUG အစိုးရက ပွညျသူ့ကာကှယျရေး တပျမတျောဖှဲ့စညျးကွောငျးကွညောတာကို ထောကျခံကွောငျး ဆန်ဒပွ လှုပျရှားမှုတှလေညျး ရှိခဲ့ကွောငျး ရနျကုနျ အငျဂငျြနီယာ သပိတျစဈကွောငျးမှာ ပါဝငျသူတဈဦးက ပွောပါတယျ။
“ပညာရေးနဲ့ ပတျသကျတာကတော့ ရနျကုနျတငျမဟုတျဘူး။ တဈနိုငျငံလုံး ပွကွတာပဲ။ နယျမှာရှိတဲ့ ကြောငျးပေါငျးစုံတိုငျးက တဈတိုငျးပွညျလုံးက ပွကွတာပဲ။ စဈကြှနျပညာရေးကို လကျမခံကွဖို့ အတှကျ။ ရနျကုနျက သပိတျက ၃ နရောလောကျတော့ ထှကျတယျပေါ့နျော၊ ကွီးကွီးမားမား ကနြျောသိသလောကျပေါ့။ အမြိုးသားညီညှတျရေး အစိုးရက PDF ကို ဖှဲ့စညျးကွောငျးကွညော လိုကျတယျပေါ့နျော။ ဒါကို ကွိုဆိုတဲ့ အနနေဲ့ ရနျကုနျလူထုက လှုပျရှားနတောတော့ ရှိပါတယျ။ အှနျလိုငျးကနေ ထောကျခံကွတယျ။ ပွီးတော့ ဒါကို Action တဈခု အနနေဲ့ ပွနျပွီးတော့ သဘောတူကွောငျးပွဖို့ ကွိုးစားနကွေတာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။”
ပွောကျကြားနညျးနဲ့ သပိတျစဈကွောငျးတှေ ဆန်ဒပွနကွေတာကို စဈကောငျစီရဲ့ လကျနကျကိုငျတပျတှကေ လိုကျလံရှာဖှဖေမျးဆီးတာ၊ လူနညျးနညျး စုတာတှတေ့ာနဲ့ ဖမျးတာမြိုးတှေ ဖွဈနတောကွောငျ့ လကျရှိ ရနျကုနျမှာ ဆန်ဒပွ စဈကွောငျးတှေ နညျးနတောဖွဈတယျလို့ ရနျကုနျဆန်ဒပွပှဲတှမှော ပါဝငျသူ တဈဦးက ပွောပါတယျ။
“ကနြျောတို့ ပြောကျကွားသပိတျလုပျခါစတုနျးက အကွမျးဖကျ အငျအားစုက ပြောကျကွား သပိတျရဲ့ သဘောသဘာဝကို အစတုနျးက နားလညျကွပုံမရဘူးဗြ။ လူခဏ စုတယျ၊ ပွီးရငျ ပွနျခှဲတယျပေါ့။ အဲ့ဒီလိုလုပျတော့ နညျးနညျး အောငျမွငျလာတဲ့ခါမှာ သပိတျအငျအားစုတှရေဲ့ လုပျတဲ့ သဘောသဘာဝကို သူတို့ နညျးနညျး နားလညျလာပုံရတယျ။ လူနညျးနညျးစုပွီဆိုတာနဲ့ သူတို့ ရောကျလာတယျ။ မနကေ့ဆို ကနြျောတို့ မွို့ထဲမှာ လူစုကွတယျပေါ့၊ သပိတျမစခငျမှာပဲ သူတို့က ဒါကို ဦးတညျပွီးတော့ ရောကျလာတယျပေါ့။ ဒါက ဒလနျကွောငျ့ဖွဈနိုငျသလို၊ CCTV ကွောငျ့လညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျတယျ။ ကနြျောတို့ ဒီဘကျက သပိတျအငျအားစုတှကေ ဒီဟာက ဘယျလို လုပျမလဲဆိုတာကို ကွိုးစားနကွေတာပါ။ မထှကျဘဲ တျောလှနျတာ နညျးသှားတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ ဒီဟာကို ဘယျလို ပုံစံနဲ့ ပွရမလဲဆိုတာကို ကွိုးစားနကွေတဲ့ ပုံပါပဲဗြ။”
ကခငျြပွညျနယျ မွဈကွီးနားမှာ ဒီကနေ့ မနကျ ၈ နာရီဝနျးကငျြက ဆိုငျကယျသပိတျပွုလုပျ လှညျ့လညျဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ ဆန်ဒပွပွီးလို့ လူစုခှဲနတေဲ့ အခြိနျ မနကျ ၁၀ နာရီခှဲဝနျးကငျြလောကျမှာ စဈကောငျစီရဲ့ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့ဝငျတှကေ အိမျစီးကားတှနေဲ့ ဆန်ဒပွသူတှကေို ဝငျတိုကျပွီး လူငယျ အမြိုးသမီး ၄ ဦးကို ဖမျးဆီးသှားတယျလို့ သပိတျစဈကွောငျးမှာ ပါဝငျသူတဈဦးက ဗှီအိုအကေို ပွောပွပါတယျ။
“ကနြျောတို့ မွဈကွီးနားမွို့ ပငျမ သပိတျစဈကွောငျး၊ မွဈကွီးနား ကြောငျးသားသမဂ်ဂတှရေော၊ ကနြျောတို့ လူငယျတှရေဲ့ Generation Z ဆိုတဲ့ အဖှဲ့ပေါ့။ ပငျမသပိတျ အဖှဲ့နဲ့ ဒီနေ့ ၅ ရကျနမှေ့ာ ဆိုငျကယျသပိတျလုပျတာ၊ မနကျ ၈ နာရီလောကျထှကျပွီးတော့ ၁၀ နာရီခှဲလောကျ လူစုခှဲတဲ့ အခြိနျမှာ ကနြျောတို့တှေ လူစီးကားနဲ့ အရပျကားပေါ့နျော။ အဲ့ဒါတှေ သုံးပွီးတော့ ရဲတှကေ အနောကျကနမှေ ပွငျးပွငျးထနျထနျလိုကျတိုကျတာပေါ့နျော။ အဲ့ဒီမှာ မိနျးကလေး ၄ ယောကျ ဒဏျရာရမယျထငျတယျ သူတို့တှကေ၊ ဆှဲပွီးတော့မှ ဖမျးသှားတယျပေါ့နျော။ ပဈခတျတာတှတေော့ မရှိဘူး။ ရဲတှကေ ခုတလော။ သူတို့တှကေ အိမျစီးကားတှနေဲ့ပဲ နောကျက နပွေီးတော့မှ အရှိနျပွငျးပွငျး မောငျးပွီး တိုကျပွီးတော့ ဖမျးတာပေါ့နျော။ ဆိုငျကယျလညျး ၄ စီးလောကျပါသှားတယျ။ ကနြျောတို့ သပိတျဦးဆောငျတဲ့ထဲက အမ တဈယောကျရဲ့ ဖုနျးပါသှားတယျ။”
ဒီနေ့ မနကျပိုငျးမှာ မူဆယျမွို့ က စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေး တိုငျးရငျးသားလူမြိုးပေါငျးစုံ သပိတျစဈကွောငျးကို လူ ၁၀၀ ဝနျးကငျြလောကျ ခြီတကျဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ အုပျခြုပျသူတှေ တရားမဲ့ရငျ ဆနျ့ကငျြရမှာ ငါတို့ဝတ်တရားဆိုတဲ့ ဆောငျပုဒျနဲ့ ခြီတကျကာ တရုတျအလံကို မီးရှို့ဆန်ဒပွခဲ့ကွတယျလို့ သပိတျစဈကွောငျးမှာ ပါဝငျတဲ့ Generation Z လူငယျတဈဦးက ပွောပါတယျ။
“မနကျ ၇ နာရီစထှကျလိုကျတယျ။ စထှကျပွီးတော့ ကနြျောတို့ လူအငျအား ၁၀၀ ဝနျးကငျြလောကျနဲ့ ကနြျောတို့ထှကျလိုကျတယျ ခငျဗြ။ ၁၀၀ ဝနျးကငျြလောကျထှကျပွီးတော့ ကနြျောတို့ နာရီစငျသှားတယျ။ ပွီးရငျ ပွညျသူ့ဆေးရုံရှသှေ့ားတယျခငျဗြ၊ ပွီးရငျ ကနြျောတို့ တရုတျအလံ တရုတျကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ အနနေဲ့ တရုတျအလံမီးရှို့လိုကျတယျခငျဗြ နာရီစငျရှမှေ့ာ။ သပိတျစဈကွောငျးက အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲ ပွနျပွီးတော့ ကနြျောတို့လူစုခှဲလိုကျနိုငျတယျခငျဗြ။ သူတို့ဘကျက အဲ့ဒီလိုမြိုးအရပျဝတျနဲ့ နညျးနညျးလာပွီး အဲ့ဒီလိုမြိုးလလေ့ာတဲ့ ပုံစံမြိုးပေါ့ အိမျစီးကားတှနေဲ့ လာတာတော့ ရှိတယျခငျဗြ။ ကနြျောတို့ သပိတျစဈကွောငျး ဘေးနားလေးတှပေေါ့.. ဟိုလိုမြိုးကွီး သူတို့ ဝငျပွီး ဖွိုခှဲသှားတာ ဘာညာမရှိဘူး ခငျဗြ သပိတျစဈကွောငျးကတော့။ ကနြျောတို့ ကွှေးကွျောသံကတော့ အုပျခြုပျသူတှေ တရားမဲ့ရငျ ဆနျ့ကငျြရမှာ ငါတို့ဝတ်တရားဆိုတဲ့ ဒီဆောငျပုဒျပေါ့နျော။”
ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီလောကျမှာ ပငျမသပိတျစဈကွောငျး ခြီတကျဖို့ ပွငျဆငျနခြေိနျမှာ ရဲကားစီးလာရောကျ ဖွိုခှဲလိုကျတာကွောငျ့ နရောပွောငျးရှေ့ လိုကျရပမေဲ့ မိုးတှေ ရှာနတေဲ့ကွားကပဲ အောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ပွုလုပျနိုငျခဲ့တယျလို့ ဆန်ဒပွစဈကွောငျးမှာ အမွဲဝငျတဲ့ တကျကွှလှုပျရှားသူ တဈဦးက ပွောပါတယျ။
“လူစုနတေုနျးမှာ ထှကျခါနီးပေါ့နျော.. ၃ နာရီထှကျမှာကို ခကျြခငျြး ၃ နာရီကို ခကျြခငျြးရပျကှကျထဲ ဝငျလာတယျ။ ခါတိုငျးလို ကွိုစောငျ့နတောမြိုးပဲနဲ့ တောကျလြှောကျမောငျးလိုကျ တောကျလြှောကျ ဝငျလာတော့ လူစုခှဲပွီးမှာ အိမျတှမှော ပုနျးနလေိုကျရတာပေ့ါနျော စဈကွောငျးကို။ အခုခြိနျတော့ ဖမျးမိတာ မရှိပါဘူး။ စဈသားတှေ မပါဘူး... ရဲကားပဲ သုံးစီးပေါ့နျော. ဝငျလာပွီးဆိုတာနဲ့ တဈစီးမှာ အနညျးဆုံး ၁၅ ယောကျ၊ ၂၀ တော့ ပါမှာပေါ့။ ကားသုံးစီးနဲ့ ဝငျလာတယျ။ ခှဲလိုကျရတဲ့ အခွအေနမှော တခွားနရောကို ပွောငျးပွီးတော့ အမွနျရှပွေီ့းတော့ အောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ဆန်ဒပွလိုကျရတာပေ့ါနျော။”
အလားတူ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး နမျ့ခမျးမွို့မှာလညျး လူထုတှဟော ထီးတှေ၊ မိုးကာအကြီင်္တှနေဲ့ မိုးထဲရထေဲမှာပဲ အငျအားထောငျခြီ ခြီတကျဆန်ဒပွခဲ့ကွတယျ။ နမျ့ခမျးမွို့က ပွညျသူလူထုတှေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတှေ၊ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ကြောငျးသားမြား သပိတျစဈကွောငျးတှေ ပူးပေါငျးပွီး စဈလကျ အောကျခံပညာရေး အလိုမရှိကွောငျး ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ကွတယျလို့ သပိတျခေါငျးဆောငျတဈဦးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
နစေ့ဉျမပွတျ လမျးပျေါထှကျဆန်ဒပွကွတဲ့ မန်တလေးမွို့သပိတျစဈကွောငျးတှေ ဒီကနမေ့နကျပိုငျးကစလို့ စဈကြှနျပညာရေး အလိုမရှိကွောငျး CDM ပညာရေးဝနျထမျးတှေ ဦးဆောငျပွီး စုပေါငျးသပိတျနဲ့ ဆန်ဒပွကွပါတယျ။ မိုးကုတျ၊ လားရှိုး၊ မိုးကောငျး၊ စဈကိုငျး၊ ကြိုကျထိုနဲ့ မျောလမွိုငျတို့မှာ စဈကြှနျပညာရေးအလိုမရှိကွောငျး လူမဲ့သပိတျ၊ ဆေးနီသပိတျတှနေဲ့ ပုံစံမြိုးစုံဆန်ဒထုတျဖျောကွပါတယျ။
ဖားကနျ့၊ ကလေး၊ မုံရှာ၊ ထားဝယျ၊ လောငျးလုံတို့မှာ လူရာခြီ ဆန်ဒပွကွသလို မကှေးမွို့အနီးကကြေးရှာတှေ စုပေါငျးပွီး စဈအာဏာရှငျအလိုမရှိကွောငျး ဆန်ဒပွကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကြိုကျထို၊ ဟင်ျသာတ၊ ပုဂံ၊ ညောငျဦးနဲ့ လကျပံတောငျးတောငျဒသေတှမှောလညျး ပြောကျကွားသပိတျ၊ လူမဲ့သပိတျ၊ အရုဏျဦးသပိတျတှဆေငျနှဲကွပွီး စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေးလှုပျရှားမှုတှေ နစေ့ဉျမပွတျလုပျနကွေပါတယျ။